Avy tamin'i Tavaradrano
Nankatoa ny hafa-drainy Andriantsimitoviaminandriana
Nalain'Andriantsimitoviaminandriana ny zanakanabavin'Andrianambonimena, hampanjakaina
Ny antony nanendren’ Andriantsimitoviaminandriana an-dRakotomavo ho mpanjaka
Rakotomavo dia niova anarana ho Andriambelomasina
Nankatoa ny hafatr'Andriamasinavalona rainy Andriantsimitoviaminandriana
Andriantsimitoviaminandriana dia nanjaka teny Ambohimanga, Ambohidrabiby moa efa voatelin'Avaradrano tamin'izay fotoana izay ka telo toko sisa ny fanjakana lehibe napetrak'Andriamasinavalona: Imerina atsimo iray manontolo, Marovatana ary Avaradrano izay nitelina an'i Mandiavato izany dia Ambohidrabiby.
Takatr' Andriantsimitoviaminandriana tsara fa tsy mahazo ilay hasina napetrak' Andriamasinavalona raha tsy avy amin'ny fianakavian'Andrianambonimena. Tsy nomeny ny zanany lahy izay nantsoina hoe Rafondrazaka fa nandeha izy nitady tamin'ny fianakavian'Andrianambonimena. Hoy Andriantsimitoviaminandriana hoe "Andeha aho hisavasava amin'ny fianakavian' Andrianambonimena. Raha toa ka nanoa izy ka Andriamasinavalona ny taranany, izaho mino fa mbola manana irai-tampo mitondra ny hasin'ny fari-bavan'ikaky (Andrimasinavalona) izy, indrindra moa ka anabavy". Hoy tokoa mantsy Andrimasinavalona rainy: “zanak'anabaviko no handray ny fanjakana satria mandray hasina ny anabavy”.
Nampitadiavin’Andriantsimitoviaminandriana ny zanak'anabavin'Andrianambonimena, dia ny zanaky Rangorinimerina izany. Tamin'izay fotoana izay dia nipetraka teny Androhibe eny ankilan'Antsahadinta Rangorinimerina satria Andriamifonozozoro vadiny dia teraky ry zareo eny Ivatobe sy Androhibe Antsahadinta, izany hoe avy amin’ny tera-dRavololondrenitrimo sy Andriandambozozoro mbamin-dry Andrianjakatrimo.
Nalain'Andriatsimitoviaminandriana daholo ny zanakalahin-dRangorinimerina. Dimy lahy sy valo vavy no natera-dRangorinimerina dia ireto avy :
Amin’ireo anabaviny valo dia roa no tadidy anarana fa nanan-taranaka, dia :
Randrianizaza renin’ Andriantsoanandriana sy Andriankotonavalona lehibe tamin’ny tafik’Andrianampoinimerina
Ravololonandriantsimitovy nanambady an’i Andriamampianinarivo zafiafin’i Andriantompokoindrindra, ary niteraka an’i Rabodomanjaka vadin’i Andriatsimitovizafinitrimo.
Rehefa tonga teny Ambohimanga ny zanaka dimy lahin-dRagorinimerina dia hoy Andriatsimitoviaminandriana hoe " Tsy sanatria akory izahay hangala-jaza fa haka zaza hampanjakaina".
Natsangany ho zanany izy dimy mirahalahy ireo ary nisafidy anankiray izy hitondra ny fanjakana.
Nofidiany hanjaka eny Ambohimanga tamin'izany ny zanaka lahiaivon-dRangorinimerina atao hoe Rakotomavo (Andriambelomasina). Nisy antony manokana anefa io.
Hevitra avy any amin’Andrianambonimena no antony nanendren’Andriantsimitoviaminandriana an-dRakotomavo ho mpanjaka. Nataon’Andrianambonimena izay hahatanteraka ny hafatr’Andriamasinavalona hoe:” An'ny zanak'anabaviko ny farany”. Tsy maty tao an-tsain'Andrianambonimena mihitsy fa zanakandriana mpandova izy fahiny na dia resy aza.
Notangirihin’ Andrianambonimena fatratra Andriamohara teny Alasora, zanaky Rangorinimerina anabaviny, mba handray fanjakana azy ary nampivadiny tamin-dRanavalomboahangy zanany vavy.
Nanaiky izany Andriatsimitoviaminandriana ka nampanjakany teny Alasora ny lahimatoa Andriamohara, ary ny lahiaivo Rakotomavo kosa nampanjakany teny Ambohimanga. Tsy afenina anefa fa kely hery Alasora (ara-tafika sy vahoaka) niohatra an'Ambohimanga izay fanjakana lehibe tokoa. Noho ny fifankatiavan'izy mpiray tampo fatratra dia nizarazara tany Ambohimanga Rakotomavo alohan'ny nandraisany ny fanjakana. Nanana tanimbary maro teny Alasora Rakotomavo ka nisy ilay hoe Eroaminandriambelomasina izay tsy foiny mihitsy ary nolovain'Andrianampoina.
Rakotomavo izany indroa miditra mihitsy satria izy zanak' anabavin'ny zanak' anabavy.
Ny tera-behivavy moa no nolazaina fa tena mandray ny hasina ary ny maha-zanak'anabavin'Andrianambonimena an-dRakotomavo no nampahery hasina azy.
Rehefa niakatra teo amin'ny fanjakana Rakotomavo dia niova anarana izy, niova ilay hoe Andriambelomasina.
Rehefa lasan' Andriambelomasina ny fanjakana dia izy no nahasahy niteny voalohany fa tsy maintsy ho izy no tompon’ny farany amin'ny fari-bavan'Ikakibe Andriamasinavalona, izany hoe ny lova napetrak'Andriamasinavalona dia izy no nahazaka ny hasina satria ao aminy no nahatanteraka ny tenin' Andriamasinavalona hoe: " An'ny zanak'anabaviko ny farany".
Rehefa nanjaka Andriambelomasina dia niakatra ny zafikeliny Andrianampoinimerina, mbola zana-behivavy ihany. Andrianampoinimerina no nahavory indray ilay fanjakana lehibe napetrak' Andriamasinavalona. Tsy vitan'ny voavoriny aza ny efa-tokon' Andriamasinavalona fa mbola nitombo lavitra noho izany, lasa enin-toko ilay izy. Resiny na nanaiky azy avokoa ny eran’Imerina ka ny “Andriam-bohitra” rehetra isan-tsokajiny dia Andriamasinavalona avokoa. Fa ny terak’Andriambelomasina sy ny teraky ny iray tampo amin’Andriambelomasina kosa dia tsy nampanoavina ho Andriamasinavalona mihitsy hatramin’izay, satria ireo no natera-dRampananamboninitany , natera-dRangorinimerina mpitondra ny hasina napetrak’Andrimasinavalona.
Mazava tsara ny tenin'Andrianampoinimerina raha mamaky ny “Tantara ny Andriana” ianareo . Any amin'ny faramparany any dia miteny izy hoe"Indreo ianareo Zazamarolahy terak’Andriatsimitoviaminandrindrazaka", (tsy iza io fa ilay ray nanangana an-dry Andriambelomasina mirahalahy avy) sy terak'Andriambelomasina sns… dia nampiany hoe " Ianareo no teraky ny trano fohiloha", dia teraky ny havany akaiky dia ny an'Andriambelomasina mianadahy avy.
Ny tena manahirana amin'ilay izy anefa ny naloaky ny kibon'Andriatsimitoviaminandriana efa lasa Andriamasinavalona fa ny zaza natsangana 5 lahy mbaminy ny an-dRandrianizaza anabavin'izy ireo no natao hoe Zazamarolahy dia ny tera-dRangorinimerina izany. Ny fakana zanakandriana kosa dia ny tera-behivavy amin’ny terak'Andriambelomasina ihany.
 Andriambelomasina dia tsy iza fa raiben'Andrianampoinimerina dia ny Ombalahibemaso izany.
 araka ny thèse de doctorat nosoratan'I Alain DELIVRE
http://atetiarana.000webhostapp.com - http://atetiarana.000webhostapp.com - http://freepages.rootsweb.com/~aviavy - http://gw.geneanet.org/aviavy